Njem Nleta Jamaica na-akpọ maka echiche sitere n'aka ndị isi ụwa maka mgbake ọrịa na-efe efe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem Nleta Jamaica na-akpọ maka echiche sitere n'aka ndị isi ụwa maka mgbake ọrịa na-efe efe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye na-ahụ maka njem nleta na Jamaica Bartlett
Onye Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica na Onye isi oche nke Organisation nke American States (OAS) na-arụ ọrụ bụ Edmund Bartlett, na-akpọ oku ka ịga n'ihu na-eme mgbanwe n'etiti mba ndị otu na ụlọ ọrụ iji mezue atụmatụ mgbake dị irè ma dị ike maka njem ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ụgbọelu na post -ọzọ mgbasa.
Atụmatụ ime ihe dị irè ma dị ike na-achọ ụzọ dị iche iche na akụkụ dị iche iche nke mgbake.
Oku a na-akpọ taa bụ maka mgbanwe na-aga n'ihu n'etiti mba ndị otu na ụlọ ọrụ - anyị ga-anụrịrị olu niile.
Harmonization nke ogbugba ndu, njem na-adigide, mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na-aga nke ọma, itinyekwu ego, na mmesi obi ike ebe ga-agarịrị.
E kwuru okwu ndị a taa, n'oge nzukọ ezumezu nke ndị otu Kọmitii Na-ahụ Maka Njem Nleta nke International-American (CITUR), nke OAS haziri. Onye nnọchi anya Minista ahụ bụ Director nke Tourism Trade na International Relations, Minista nke njem na njem nleta, Tyesha Turner.
“Oku m na-ekwu taa bụ maka mgbanwe na-aga n’ihu n’etiti ndị otu na ụlọ ọrụ - anyị kwesịrị ịnụ olu niile. Anọ m na-agba ume ka a nyochaa usoro nyocha maka atụmatụ na ngwaọrụ ndị a chọrọ maka mpaghara anyị maka njikọ na ngwa ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ yana ihe metụtara njem njem nke bụ isi ihe ntinye ego nke njem anyị, ”Turner kwuru na nnọchite Minista ahụ.
“Usoro ihe omume dị irè ma dị ike na-achọ ụzọ dị iche iche maka ihe dị iche iche nke mgbake - nkwekọ nke usoro ogbugba ndu, gụnyere usoro ogbugba mmiri na usoro ntinye; njem nlegharị anya na-echebara gburugburu ebe obibi echiche; ihe ịga nke ọma mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze; itinye ego na ntinye nkwa na abawanye. Anzọ dị otu a kwesịrị ịkwalite ma kwalite atụmatụ zuru ezu, nke zuru ezu, nke ga-eru, ma dịkwa irè iji mee ka anyị ruo ebumnuche anyị, ”ka ọ gbakwụnyere.
O kwusiri ike na Minista Bartlett na-agba ndị òtù ume ka ha tinye usoro atụmatụ mgbake dị irè ma dị ike nke na-eji ọtụtụ ụzọ akụkụ dịgasị iche iche nke mgbake. Nke a kwesiri ileba anya na nkwekorita nke usoro iwu, tinyere usoro ihe banyere ihe eji eme ka ihe ghara ịdị ọcha na ntinye; njem nlegharị anya na-echebara gburugburu ebe obibi echiche; ihe ịga nke ọma mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze; itinye ego na ntinye nkwa na abawanye.
Ọ sịrị, "Suchzọ dị otu a kwesịrị ịkwalite ma kwalite atụmatụ zuru oke, nke zuru oke, nke na-erute ma dịkwa ire iji mee ka anyị ruo ebumnuche anyị."
Air Canada na-ewepụta ọrụ ọhụụ na-enweghị ọrụ n'etiti ...
Indonesia njem nleta paradise Bali na-aga n'ime oké ...
CDC wepụtara ozi ngwa ngwa maka onye America ọ bụla ...
WHO Chief: COVID-19 Global Wave Nke Atọ